Bhaibheri Rinoti Chii Panyaya Yekupikira?
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Jesu akarapa amai vemudzimai waPetro.—Mateu 8:14, 15; Mako 1:29-31
PASI rose, chechi yeRoma, chechi dzeOrthodox, chitendero chechiBhudha nezvimwewo zvitendero zvinoti vatungamiriri nevafundisi vazvo vanofanira kupikira. Asi vakawanda vanoti kupikira ndiko kuri kuita kuti vafundisi vemachechi akawanda vaite unzenza uye vabate vana chibharo.
Saka zvine musoro kubvunza kuti, Bhaibheri rinoti vaKristu vanofanira kupikira here? Kuti tipindure mubvunzo uyu, ngationgororei kwakatangira tsika iyi uye kuti Mwari anoionawo sei.
MATANGIRO AKAITA TSIKA YEKUPIKIRA
Bhuku rinonzi Encyclopædia Britannica rinoti kupikira kunoreva “kusaroora kana kusaroorwa, uye munhu wacho orega kuita zvepabonde, kunyanya kana ari wechitendero.” Achitaura nevamwe vakuru vakuru vechechi yeRoma, Pope Benedict XVI akati kupikira “kwakabva patsika yaiitwa kare kare, pedyo nenguva yakararama vaapostora.”
Asi vaKristu vekutanga vaisaita zvekupikira. Mumwe wacho ndiPauro, uye akatonyevera vamwe vaKristu nezvevanhu vaizotaura ‘zvinhu zvinotsausa, vachirambidza kuroorana.’—1 Timoti 4:1-3.
Tsika yekupikira yakazotanga kuitwa mumachechi echiKristu kunyika dzekuMadokero mumakore ekuma100 C.E. Maererano nebhuku rinonzi Celibacy and Religious Traditions, tsika iyi “yaienderana nekusada kuita zvepabonde kwakanga kwava kuitwa nevanhu vakawanda vemunyika dzaitongwa neumambo hweRoma.”
Mumakore akazotevera, vakuru vakuru vemachechi vakatanga kukurudzira nyaya yekuti vafundisi vapikire. Vaifunga kuti kuita zvepabonde kunosvibisa munhu pamberi paMwari uye kuti hakuenderani nebasa rekutungamirira muchechi. Asi Encyclopædia Britannica inoti “mumakore ekuma900 C.E., mapristi akawanda nemamwe mabhishopi aitova nemadzimai.”
Nyaya yekupikira yakatozoitwa mutemo pakaitwa Lateran Council mugore ra1123 uye muna 1139 kuguta reRome, uye kubvira ipapo kusvika nhasi, ndizvo zvichiri kuitwa nechechi yeRoma. Mutemo uyu waiita kuti chechi irambe iine simba uye isarasikirwa nemari nekuti vapristi vaiva nemhuri vaisiyira vana vavo zvinhu zvechechi senhaka.
MWARI ANOONA SEI KUPIKIRA?
Maonero aMwari panyaya iyi anotaurwa zvakajeka muBhaibheri. Jesu akataura nezvevanhu vaisava muwanano sezvaakanga akaitawo, vachizviitira “nokuda kwoumambo hwokumatenga.” (Mateu 19:12) Muapostora Pauro akataurawo nezvevaKristu vakasarudza kusapinda muwanano sezvaakanga akaita vachizviitira “mashoko akanaka.”—1 VaKorinde 7:37, 38; 9:23.
Jesu naPauro vakanga vasiri kurambidza vaKristu kuroora kana kuroorwa. Jesu akati pavateveri vake, havasi vose vane “chipo” chekusaroora kana kusaroorwa. Kunyange zvazvo Pauro akataura kuti kusaroora kana kusaroorwa kwakanaka, akatiwo: “Handina murayiro unobva kunaShe, asi ndinotaura zvandinofunga.”—Mateu 19:11; 1 VaKorinde 7:25.
Uyezve, Bhaibheri rinoratidza kuti vaKristu vakawanda vakararama kare, kusanganisira muapostora Petro, vainge vakaroora. (Mateu 8:14; Mako 1:29-31; Mabasa 18:2) Nekuzara kwakanga kwaita unzenza munyika dzaitongwa neumambo hweRoma panguva iyoyo, Pauro akati kana mutariri wechiKristu aine mhuri, aifanira kuva ‘nemudzimai mumwe chete’ uye “vana vanozviisa pasi.”—1 Timoti 3:2, 4.
Kuroorana kuri kutaurwa uku hakusi kwekungogara mese pasina kuita bonde, nekuti Bhabheri rinonyatsotaura pachena kuti “murume ngaape mudzimai wake zvaanofanira kuwana” uye kuti havafaniri ‘kunyimana’ bonde. (1 VaKorinde 7:3-5) Saka muBhaibheri, hapana panotaura kuti vaKristu vanofanira kupikira.
NEKUDA KWEMASHOKO AKANAKA
Kana Bhaibheri risingatauri kuti vaKristu vanofanira kupikira, nei Jesu naPauro vakataura nezvekusaroora kana kusaroorwa sechinhu chakanaka? Nekuti kunopa munhu mukana wakakura wekuparidzira vamwe mashoko akanaka. Vasiri muwanano vanenge vaine nguva yakawanda yekuita basa raShe, sezvo vasina zvinetso zvinosangana nevanhu vari muwanano.—1 VaKorinde 7:32-35.
Semuenzaniso, David aigara kuMexico City achishanda basa raibhadhara. Asi akasarudza kusiya basa rake ndokutamira kumaruwa kuCosta Rica kuti anodzidzisa vamwe Bhaibheri. Kusaroora kwakamubatsirawo here? Anoti, “Ehe, nekuti zvakanga zvakaoma chaizvo kujairana netsika dzeko nenzvimbo yacho. Asi sezvo ndisina kuroora, hazvina kuzonyanya kundiomera.”
Claudia haanawo kuroorwa, uye akatamira kunzvimbo dzaiva nevanhu vashoma vaiita basa rekuparidza. Anoti, “Ndinonakidzwa nebasa randinoitira Mwari. Pandinoona kundichengeta kwaanoita, kutenda kwangu kunowedzerawo kusimba.”
“Pasinei nekuti uri muwanano kana kuti hausi, kana ukashandira Jehovha Mwari nemwoyo wese, uchawana mufaro.”—Claudia
Munhu haafaniri kuita zvekuzvimanikidza kuti asava muwanano. Claudia anoti: “Pasinei nekuti uri muwanano kana kuti hausi, kana ukashandira Jehovha Mwari nemwoyo wese, uchawana mufaro.”—Pisarema 119:1, 2.
VaKristu vasina kuroora kana kuroorwa vanogona kufara here? Bhaibheri rinoratidza kuti tinofanira kuona sei wanano, uye rinewo muenzaniso wakanaka wemunhu asina kuroora.
Nyaya dzekupfimbana chinhu chokungotambawo nacho here?